Sakafo nasionalin'i Kolombia
Kolombia dia firenena manana tantara lava. Talohan'ny nahatongavan'i Christopher Columbus, dia nisy foko indianina maro be, avy eo dia nametraka mpanjohy ny Espaniola, ary avy eo - mpifindra monina avy any Azia sy Afrika. Ny fikambanana iraisam-pirenena dia mety tsy hisy fiantraikany amin'ny fampiroboroboana ny sakafo any Kolombia, izay nahitana karazana fomban-drazana maro samihafa. Androany, mampitolagaga ireo mpizahatany manana fofona mamy sy lovia tany am-boalohany, izay mampiavaka ny tsy mifanaraka aminy, dia toa misy ingredients.
Ny voankazo, ny tsaramaso, ny vary, ny vary, ny sakafom-biby ary ny henan-kisoa no vokatra fototra. Noho ny fisian'ny ranomasimbe roa no nanasa ny firenena, tao an-dakozian'i Colombie, dia nampiasaina betsaka koa ny ranomasina. Renirano sy trondro an-dranomasina no malaza eto.
Zava-mahadomelina sy mahazatra ao amin'ny faritra any Kolombia:
Andes - mofo matsiro sy lasopy matevina, lovia vita amin'ny sira;
faritra atsimo - trondro ririnina, voankazo mafana, papango;
ny morontsirakin'ny Oseana Pasifika - akanjo misy akondro, voaniho, be dia be ny ranomasina;
Karibôka any Karaiba - karazan-tsakafo sy trondro isan-karazany, sokatra manitra vaovao.
Sakafo 10 tokony ho ezahanao any Kolombia
Ny lovia eo an-toerana dia afaka mankafy na ankafizin'ny olona iray, saingy tsy azo atao ny tsy miraharaha azy ireo. Any Kolombia dia tsy hahita sakafo vaovao sy tsy misy tsirony ianao - ny sakafo eto dia mamirifiry, manankarena betsaka amin'ny sotro sy ny zava-manitra. Tsy misy mpizahatany afaka manadino ireo lovia ireo:
Bandeja Pais. Misy sombin-tsakafo, trondro na akoho dia atolotra miaraka amin'ny savony, vary, ovy, avocados ary akondro manitra. Tena mahafinaritra ilay tsiro. Azonao atao ny mandidy ity lovia ity any amin'ny trano fisakafoanana rehetra izay manompo ny sakafo nasionalin'i Kolombia.
Cazuela. Io legioma mihinam-boankazo io miaraka amin'ny fanampiana voankazo, hena na seafood. Ny anaran'ilay lovia dia avy amin'ny potika, izay nanamboarana azy ary avy eo nanompo.
Lechona. Ity lovia ity dia avy amin'ny kisoa iray, nokarakaraina tanteraka sy voankazo miaraka amin'ny legioma, ny vokatra ary ny vary.
Ahikama. Io savony io dia natao tamin'ny hodi-biby, vita amin'ny yucca sy ovy. Ao amin'ny trano fisakafoanana sy trano fandraisam-bahiny no misy azy io, ary ampiasaina amin'ny sakafo antoandro. Ireo lasopy malaza hafa dia ahitana mazamorro (avy amin'ny hena sy tsaramaso), ajaco santafereno (ronono miaraka amin'ny legioma) ary sancoch de galina (lasopy lasopy).
Ceviche. Ity lovia ity dia "tonga" tany Kolombia avy any Però , izay malaza be. Trondro mason'olon-kiraro izy io ao anaty ranom-boasary. Amin'ny marinade dia matetika manosika dipoavatra mafana sy zava-manitra, ary ny trondro dia matetika nosoloina seafood. Ao an-tanindrazan'ny tanàna manan-tantara, i Ceviche dia voatolotra vary sy tsiro mahafinaritra, fa ny Kolombiana kosa dia mihevitra azy io ho sakafo mahaleo tena.
AREP. Kitapo mofomamy vita amin'ny lafarina katsaka, vita amin'ny afo. Ny fonosana ao amin'ny isp dia tsy mitovy, ary afaka manandrana izany na aiza na aiza alehanao mivarotra sakafo eny an-dalana. Manompoa ity mofomamy ity, manolo ireo Kolombiana amin'ny mofo, any amin'ny trano fisakafoanana rehetra.
Papas-Chorreadas. Anisan'ireo paty voatoto ireo, ny lokon-koditra dia tarihin'ny lovia, izay anomezan'ny voatabia, volo sy cheese koa.
Empanadas. Ireo no malaza any Amerika Atsimo misy karazan-tsakafo isan-karazany.
Kabanos. Sakafo marevaka, mafana amin'ny afo misokatra, somary mafonja sy mahafinaritra.
Ahi. Ny tsiro voalohany amin'ny salady, izay ahitana chili, vinaitra ary karazam-bary isan-karazany. Io lovia io dia hiantso ireo izay tia fetsy ary tsy manana olana amin'ny famoahana. Tahaka ny Kôlômbiana sy ny salady hafa miaraka amin'ny legioma, hena ary fako.
Kolombia dia tanin'ny fahavaratra mandrakizay, ary ny vokatra dia malaza be eto. Rehefa tonga eto voalohany dia mankalaza karazana voankazo maro isan-karazany ireo mpizaha tany, eny fa na dia tsy fantatra aza ny anarany, tsy lazaina intsony ny tsirony.
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny voankazo eo an-toerana dia tsy ampiasaina amin'ny sakafo, satria tena be diaspora izy ireo, ary mba hanomanana ny hanina vaovao. Afaka manidina eo amin'ny arabe any amin'ny tanàna lehibe ny sokatra vao nafangaro afa-tsy $ 1 monja.
Anisan'ny vokatra malaza indrindra amin'ny mpizaha tany ny tokony hanamarihana:
mango - ny mony dia mavo mena (ho an'ny tsindrin-tsakafo, saosy sy sira) ary mena maitso (mihinana sira);
avokado - ampiasaina hanamboatra sakafo mahazatra maro, ary mametaka ny voankazo masaka amin'ny mofo;
platan - dia mampahatsiaro banana matanjaka iray maitso, izay anaovana sakafo matsiro sy menaka no vita;
Papaya - avy amin'ity voankazo ity no manondraka siramamy tsara;
guava - ny endriky ny henan'ity voankazo ity, mampahatsiahy ny singan-pirazanana sy ny pear, izay manamboatra sokatra, cocktail, marmelade na vao mihinana vao;
lulo - dia mitombo ao Kolombia ary tena be diaspora, noho izany dia manamboatra lemonades izy;
tomato de arbol - ilay hazo malaza "voatabia", ny voankazo voa mankany amin'ny fanomanana ny sira.
Ao anatin'izany ny alika sy ny liqueur misy tsiro anise - aguardiente - dia malaza amin'ny mpizaha tany. Ny divay ao Kolombia dia tsy dia tsara loatra, fa ny labiera dia mangataka, indrindra fa Aguila, Dorado ary Club. Ny lalànan'ny lalànan'i Kolombia dia avela hanjavona hatramin'ny 18 taona.
Ny ravin-koka avy any coca dia be mpankafy be eto. Mifanohitra amin'ny finoan'ny besinimaro, tsy misy fiantraikany ratsy izany, fa fotsiny manome hery, mandroso ary manampy amin'ny famindrana ny vanim-potoanan'ny fanitsiana, indrindra any amin'ny faritra avo.
Kafe mangatsiatsiaka sy sôkôla mafana tsara no tena zava-pisotro mahatalanjona ho an'ny Kolombiana. Izy ireo koa dia mangataka amin'ireo mpizahatany izay mandray karazana voanio kafe sy koban-kakao ao an-trano tahaka ny fahatsiarovana mahafinaritra.
Desserts sy sweets
Kolombiana tia zava-mahadomelina toy ny firenena hafa, ary mampiasa ireo fanomezam-pahasoavana nomena azy ireo mba hanomanana ny tsindrin-tsakafo. Ireo mpizahatany dia mankasitraka ny hafanana avy amin'ireto sakafo ireto:
arros-kon-koko - rice voamaina amin'ny ronono voanio;
Manhar-blanco - Sakafo mamy miaraka amin'ny tavy vanila avy amin'ny atody, siramamy, kanelina ary ronono;
Bunuelos - mofomamy amin'ny baosin- tsolika menaka;
Bocadillo - gusta goavam-bonjy , izay manana tsiro mamy;
Tendacion - akondro maniry vita amin'ny kanelina, vanila ary siramamy.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny sakafo any Kolombia?
Manaova fanandramana mamirapiratra ny sakafo Kolombiana tsara indrindra any amin'ny trano fisakafoanana gourmet, izay manomboka ny vidin'ny fisakafoanana amin'ny $ 30 isaky ny olona. Eto ianao dia afaka mahazo antoka ny fisian'ny sakafo mahavelona sy mendrika. Ankoatra ny sakafo nentin'i Kolombia, ny sakafo Arzantina sy Eoropeana dia malaza any amin'ireo tanàn-dehibe. Raha tianao, dia afaka mahita barazy sushi ianao, lovia wok ary sakafo amerikana.
Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia mihinana trano fonenana midadasika. Tokony ho fantatrao fa tena mamy ny sakafo maraina any Kolombia, ary ny sakafo atoandro dia misy sakafo 3 misotro. Ny sakafo maraina dia handany eo amin'ny $ 10. Ho an'ny toro-hevitra, matetika ny pesos 1-2 arivo dia matetika ampidirina amin'ny fanamarinana. Ny safidy amin'ny sakafo an-dalambe ihany koa dia goavana: paosin-tsakafo sy burgers, traditions arepa sy ceviche. Tokony hividianana siramamy avy amin'ireo voankazo mivoaka amin'ny voankazo eo anatrehanao ianao.
Ririnina any Kolombia
Inona no hitondrana an'i Arzantina?
Kolombia - fiarovana ho an'ny mpizaha tany
Tierra del Fuego (Shily)
Visa ho an'i Bolivia
Valam-pirenena ao Arzantina
31 ny dikan-teny maoderina indrindra amin'ny tranokely
Skirt miaraka amin'ny tsipika tady
Ahoana no hanesorana ny fofona amin'ny karipetra?
Potato ao anaty oven - recipe
Fetibe fanatanjahan-tena ao amin'ny kindergarten
Vavaka ho an'ny fahasalamana sy fanasitranana
Magnesium Sulphate - Fampiharana ny lanjany
Rantsan-kazo ao anaty boaty ho an'ny ririnina - fomba fitsaboana
Peppermint - toetra mahasoa
Anti-inflammatoire medikaly ho an'ny olona mangatsiaka
Ahoana ny fomba hisasarana zaza tsy ampy taona?